Umaddu waxay xukuumadda uga fadhiyaan in xuquuqdooda ay helaan | Xarshinonline News
Umaddu waxay xukuumadda uga fadhiyaan in xuquuqdooda ay helaan
Posted by xol2 on March 22, 2010 · Leave a Comment
Waxa muddooyinkan caalamku si aad ah indhaha ugu hayaa arrimaha dooroshooyinka, waxaana si aada looga baqayaa in mar kali dib loo dhigo doorashada madaxtinimada, taasi oo muddooyin badan dib loo dhigay kowna ka yahay Xisbiga UDUB oo caadaystay in uu majaraha waddanka habaabiyo kuna ciyaaro rabitaanka umadda. Waxa sannadkii 2001 loo codeyeey dastuur waxaanay bulsho wayntu muujisay kartidooda iyo aragtidooda waxaanay codayentu ku dhacday 97.9% in wadanka lagu dhaqo dastuur iyo cadaalad.
Arrintaa maxaa ka hirgalay ilaa hadda?
Waa qoraal la diyaareyey oo dhamayestiran, oo yaala meel, wax uu umada uu u qabanayaa majiro inta xukuumada Rayaale ay maamulka haysato. Aragtida UDUB waa in umada la majaro habaabiyo, oo kolba dib loo dhigo doorashada, wax ugu jira in dhawr kA ag dhawi ay sameeyaan marba waxay rabaan. Umadda waxa haysta niyad jab aad u wayn calamkuna waa yaaban yahay.
Waxaan leeyahay xaqii umadu mee, maxaa umadda loogu ciyaarayaa oo waxa loogu dhimayaa xuquuqda aadamiga, waa gaf iyo qadaf. Waxaanay umadu afkooda ka batay waxaanu ka cabsi qabnaa in mantana dib loo dhigo mar kale.
Xalku waxa uu maanta ku jiraa in umadda la mariyo waxay iyagu doonayaan. Qiimayn aad loogu kalsoon yahay oo ka dhacday dhammaan ba dalka gudihisa iyo qurbo jooga Somaliland, waxa dadka intiisa badani qabtaa ama ay ku rajo wayen yihiin inaanay doorasho qabsoomayso 65.3%. Waxaana tasi ugu wacan dhawrkii mar ee dib loo dhigay doorashada.
Qaran macnihiisu waa in la sinaado oo sharciga loo hogaan samo, maha si in ninba sida uu doono yeelo. Run ahaanti ilo lagu kalsoonyahay oo ku ag dhaw madaxwayne Dahir Rayaale Kahin waxay sheegaysaa in aanu qabin in dib loo dooran doono hadii ay doorasho timaado.
Kulmiye waa xusbi mucarada waxaanu hayestaa taageero uu ku heli karo doorshadan soo socota, waxa uu u hilanyahay in uu isbeddel ku sameeyo mamulka dalka. Waxaanu inta badan ka shaqeeyaa ilaalinta rabitaanka umadda. Waxaanu dadaal ugu jiraa sidi uu Rayaale iyo Faysalba ula tartami lahaa ugana guulaysan lahaa. 69.45%
Ugu dambayntii waa in umadda la siyaa xaqooda oo codbixinta doorashada laqabtaa, si ay u noqoto markhaati calamku dawadaan.
Eng: Farhan Ahmed Mahamoud
Agaasimaha guud ee hayada MSFYA
← “Naga daaya tan aad odhanaysaan Mucaaradkaa sidaa yidhi, mar hadday yidhaahdeenna Allaa yidhi”
Maxaa ka taqaan maal-qabeennada adduunka ugu da’da yar →